बिहानको यौन सम्पर्क सबैभन्दा उत्तम – Saurahaonline.com
तपाईंले यौन सम्पर्क राख्ने समय कुन हो ? साता वा महिनामा कतिपटक यौन सम्पर्क राख्नुहुन्छ ? कुन समयमा यौन सम्पर्क राख्दा उचित हुन्छ ? बेला न कुबेलाको यौन सम्पर्कले मानिसको शरीरलाई हानि पुर्याउनुका साथै यौन प्रक्रियालाई निरश बनाउन सक्छ ।
यौन सम्पर्क राख्ने तरिका र समय मिल्नु स्वास्थ्यका लागि उत्तम मानिन्छ । तपाईं एकपटक आफ्नो सेक्स सेड्युललाई ध्यान दिनुहोस् । तपाईंले जुन समयलाई यौन सम्पर्कका लागि उत्तम मान्नुहुन्छ, त्यो सही समय नहुन पनि सक्छ ।
एक अध्ययनअनुसार महिला र पुरुष दुवैमा कामेच्छाको अन्तर धेरै हुन्छ । दुवै एकै समयमा यौन सम्पर्कका लागि तयार नहुन सक्छन् । महिला साँझपख यौन सक्रियताको बढी महसुस गर्छन् भने पुरुषले बिहान ।
अधिकांश मानिस राति ९ बजेपछि यौन सम्पर्क राख्छन् । यद्यपि, विशेषज्ञहरुका अनुसार सुत्नुअघि यौन सम्पर्क राख्नु सुविधाजनक मानिए पनि राम्रो मानिँदैन । अधिकांशले रातमा यौन सम्पर्क राखे पनि त्यसको सही अनुभव उनीहरुले लिन पाउँदैनन् । किनकि त्यस समय शरीर र मस्तिष्क दुवै थाकेको हुन्छ । त्यसैले यौन सम्पर्कको भरपूर आनन्द, विशेष यौन अनुभूतिका लागि बिहानको समयमा हुने सेक्स सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ ।
बिहान उठेपछि महिला र पुरुष दुवैले आफूलाई ताजा महसुस गरिरहेका हुन्छन् । त्यस समय हार्मोनको सक्रियता पनि उच्च हुन्छ । बिहान यौन सम्पर्क राखे दिनभर ताजा अनुभूति हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
मर्निङ सेक्स सबैका लागि सम्भव नहुन सक्छ । तथापि, आफ्नो अभिरुचिमा कुनै कमी नआओस्, र यौनको भरपुर आनन्द लिन सकियोस् भन्ने इच्छा राख्ने हो भने यो उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ ।